samsung galaxy note 5 uye s6 kumucheto plus kudonhedza neiyo fcc ine verizon uye ku & t lte mabhendi
Kuru Nhau & Ongororo Samsung Galaxy Note 5 uye S6 kumucheto Plus kudonhedzwa neFCC neVerizon uye AT & T LTE mabhendi
Samsung Galaxy Note 5 uye S6 kumucheto Plus kudonhedzwa neFCC neVerizon uye AT & T LTE mabhendi
Pakutanga nhasi, zvakaonekwa kuti zvese zviri zviviri Samsung Galaxy Note 5 uye iyo Samsung Galaxy S6 kumucheto Plus vakashanyira FCC. Kazhinji yenguva, kana chishandiso chikasimbiswa neFCC, icho & apos; chiratidzo chekuti kuvhurwa kunogona kuve padhuze, uye, mune mamiriro ezvekupedzisira Nyamavhuvhu-kuvhura runyerekupe rwakakomberedza Galaxy Note 5, urwu ruzivo runokosha.
Vhiki rapfuura iri, zvese unnamed insider masosi uye indasitiri vanoongorora yakakwira kusimudzira kuti iyo Samsung Galaxy Cherechedzo 5 ichavhurwa muna Nyamavhuvhu 12. Nepo fungidziro yezuva rekuburitsa inosiyana pakati paAugust 14 naAugust 21 (kwatiri, yekupedzisira ndiyo inonyatso kujeka), kubvumirana kwese kunoita sekunge Samsung icha kurumidza kuvhura iyo Galaxy Cherechedzo 5, pamwe nemaviri-kumucheto musiyano unotarisirwa kunzi iyo Samsung Galaxy S6 kumucheto Plus, nekukurumidza sezvazvinogona. Kana iwe & apos; uchinetseka, hongu, vapari vemhosva vanonzi ndivo vari kuuya Apple iPhone 6S uye iPhone 6S Plus.
Kutanga neGirazi Cherechedzo 5, ese ari maviri AT & T uye Verizon shanduro dzakaonekwa mune FCC dhatabhesi. Iyo Verizon Galaxy Cherechedzo 5 inotakura modhi nhamba SM-N920V, uye inoenderana neVerizon LTE mabhendi 2, 4, uye 13. Iyo SM-N920A, iyo AT&T vhezheni, inoenderana neAT&T LTE mabhendi 2, 4, 17, uye bhendi 12, iyo AT & T ichatanga kushandisa munaGunyana.
Ingoitika kana iwe uchida pfupi yekudzokorora, iyo Samsung Galaxy Cherechedzo 5 inotarisirwa kuti iuye neese-mune-imwe Exynos 7422 chipset, 4GB ye RAM , uye 5.67-inch Super AMOLED kuratidza inomhanya pa1440 ne2560 pixels (QHD). Panyaya yekugadzirwa, iyo Galaxy Cherechedzo 5 inonzi inowana kurudziro yakawanda kubva kuGPS S6, uye ichabatanidza a simbi furemu uye girazi kumashure . Nehurombo kune vamwe , akawanda masosi akataura kuti fananidzo ichawedzera mukushaikwa kwebhatiri rinobviswa uye rutsigiro rweMicrosoft.
Iyo Verizon uye AT&T shanduro dzeSamsung Galaxy S6 kumucheto Plus inotakura manhamba emhando dzeSM-G928V uye SM-928A, zvichiteerana, uye inotsigira iwo mamwe maLTE mabhendi seCherechedzo 5 shanduro.
Seizvo zita rine runyerekupe rinoratidzira, iyo Samsung Galaxy S6 kumucheto Plus inonzi inovhenekerwa-vhezheni (maererano nesaizi) yemupendero weS6. Nepo mamwe e mishumo yekutanga yakataura kuti Samsung ichashandisa Qualcomm & apos; s Snapdragon 808 chip, ruzivo rwechangobva kuitika runoratidza izvozvo Samsung yakazosarudzira iyo Exynos 7420 , chip imwechete iyo inopa simba S6.
chinyorwa: FCC ( 1 ) ( piri ) ( 3 ) ( 4 ) kuburikidza GforGames
mobile inovhara rini
samsung galaxy s21 Ultra madhiri
Asus ZenPad S 8.0 Z580CA Ongororo
Verizon kune yekutanga Samsung Galaxy Note 9 BOGO dhiri gare gare vhiki ino
Galaxy S10 & apos; s PowerShare inodzosera kumhanya yekumhanyisa bvunzo ne Samsung Buds uye Tarisa Inoshanda
Dzazvino nyaya kubaya Apple; foni app inotonhora pa iPhone 7, iPhone 6s uye iPhone 5s
Motorola DROID Turbo vs Samsung Galaxy Cherechedzo 4
Chii & apos; s itsva paNetflix uye HBO Mbudzi 2019: 'Iyo yeIrishman' kuburitswa uye Silicon Valley yekupedzisira
iOS 15 uye iPadOS 15 inogadzira Apple & apos; maNotes zvakanyanya kuzivikanwa kupfuura nakare kese: Zvese zvitsva maficha
Pixel 2 inonzi inoratidzira IP68 kushorwa kwemvura, 64GB / 128GB kuchengetedza, inogara ichiratidzwa